Maka: ukhuthazo | Martech Zone
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ndingu-sucker wombala we-infographic… sele sishicilele indlela abantu besini abayitolika ngayo imibala, umbala, imvakalelo kunye nokufaka uphawu nokuba imibala ayichaphazeli indlela yokuziphatha yokuthenga. Ezi nkcukacha ze-infographic zenzululwazi yezengqondo kunye nembuyekezo kutyalomali inkampani enokuyifumana ngokujolisa kwimibala abayisebenzisayo kumava abo omsebenzisi. Iimvakalelo ezikhutshwe ngombala zisekwe ngakumbi kumava obuqu kunakwinto esixelelwa ukuba bayimele. Umbala obomvu unamandla
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Kule nyanga sineefotoots ezimbini kunye nabaxhasi, ividiyo yedrone, kunye nevidiyo yobunkokeli… konke ukwenza ngokwezifiso iisayithi zabaxumi kunye nomxholo. Ngalo lonke ixesha sitshintshisa imifanekiso kunye nevidiyo kwiindawo zabathengi kwaye sizitshintsha sifake iifoto zenkampani yabo, abasebenzi babo kunye nabathengi babo… iyayiguqula indawo, kunye nokuzibandakanya kunye notshintsho lwanda. Enye yezinto ezifihlakeleyo esingazichongi xa sibona indawo, kodwa